भो हाम्लाई कुलमान चाहिँदैन ! « Kakharaa
जबदेखि देशमा कुलमान उदाए तबदेखि जनताले ठुलो दुस्ख पाए । हो देशबाट लोड्सेडिङ हट्यो । रातभरि बत्ती बल्दा कति किरा आँगनमा आए कतिका आँखा खाए ।
जनताका विद्युतीय सामान धेरै चल्दा बिजुलीको बिल धेरै बढेको छ । चौबिसै घन्टा उद्योग चल्दा मजदुरले दु:ख पाएका छन् । इन्भर्टर र ब्याट्रीको व्यापार घट्नाले तिनका परिवार आपतमा छन् । यसैको व्यापार घट्नाले छिमेकी रिसाएको छ । अन्धकार घट्नाले जनसंख्या घट्न सक्ने खतरा बढ्दो छ ।
फेरि हामीलाई चाहिएको अँध्यारो नै हो । त्यही युगमा बुद्ध, सीता, राम जस्ता व्यक्ति जन्मिए बिजुली आइकन त हामी जस्ता मात्रै त हो नि जन्मेका ! अँध्यारै पार्नु परेपछि किन चाहियो कुलमान ?
आम नागरिकले यिनै कुलमानको पक्षमा सरकारलाई दबाब दिएर गलत निर्णय गराउन सक्छन् । मुलुक पेट्रोलमुक्त, ग्यासमुक्त भएर खतरा आउन सक्छ । बिजुलीका गाडीले प्रदूषण बढाउन सक्छ । त्यसैले आम नगरिकले सरकारलाई गलत निर्णय गर्नबाट जोगाऔँ । सबैले भनौँ, ‘भो हाम्लाई कुलमान चाहिँदैन !